Umhla My Pet » How To Kiss Via Zodiac Sign
ukubuyekezwa: Aug. 05 2020 | 3 min ukufunda
Ukwanga kuqala ukuba nomntu yenye amathuba ekugqibeleni kubudlelwane amagqabi, kunye nento babini kuni uya khumbula. Ukuba unayo embi ngokumanga kuqala, akukho kudla singabi nokuphola ukuba. Funda ukubona indlela ofanele kiss umhla yakho okokuqala:
Xa usenza yona kuqala uxhinele Aries, ukuba udla awunalo azikhathaze emane ibaleka kakhulu okanye elinde elifanelekileyo. Ukuba ufuna awaphuze, kuyenza alibazise. Bayaqonda ukuba sizuze mzuzu nokuba ngqo. Kwenze kushushu kwaye uyakuthanda. Nangona kufuneka uyazi, mhlawumbi ndiza kukwanga kuqala.
Xa usenza yona kuqala ukuncamisa Aquarius, Ufuna ukuba ulinde. Musa ukuyenza loo nto ngokukhawuleza, kwaye musa ukwenza kiss eshushu ngok. Lo mqondiso ukhetha umtshiso olucothayo, oko kwenza kube wokugqibela. Abayi kuthatha izintso, ngoko kuza kufuneka. Stroke okanye kiss intamo yabo phambi kokuba kiss ngomlomo wabo ngokwenene ukufumana kubo uza.
Xa usenza yona kuqala ukuncamisa Gemini, baxelele ukuba ufuna awaphuze kuqala. Lo mqondiso aphendule amazwi kunalo naliphi na. Sebeza arhaleleke kwi indlebe yabo, ngoko kukrukra kuyo. Kudla iingalo zabo okanye ubambe isandla sabo (zombini olawulwa Gemini). Ezinye Geminis olurhiwula kuqala, kodwa ngokuqinisekileyo kudla ngokuba bonke Login akukho uziphose, ngoko ke kuya kufuneka ukuba.
Xa usenza yona kuqala ukuncamisa Cancer, kufuneka Ndiyazi ukuba zemveli kwaye ungathanda tofo eyayimngqongile, oko kuyenza ekupheleni ngomhla kwiminyango. Xa awaphuze, kubamba ngeengalo zakho ukuze bazive bekhuselekile kwaye ikhuselekile. Musa kubuyeka phezu elide kakhulu, kwaye musa ukuba lixelegu.
Xa usenza yona kuqala ukuncamisa Leo, Ukuyenza ibe ngumdlalo weqonga njengoko unako. Lo mqondiso ufuna ubomi kuba imovie, kwaye iya kudaniswa kunye nantoni eziqhelekileyo kwaye i yadika. Mangeni phantsi senyanga, kuloo mvula yayigalela, okanye phakathi kwisitalato. Kwenze ndiyazingca umzobe phandle.
Xa usenza yona kuqala ukuncamisa Virgo, khangela ukuphefumla kwakho kwangaphambili. Ukuba waya isidlo, Ukubetha lokuhlambela phambi kokuba ukuqiniseka ukuba akukho nto esinamathele amazinyo akho kwaye izakuvelisa zetyeleba okanye usebenzise acoce. Akukho nto uza kude bababuvisele ngaphezu bephuzana umlomo emdaka. Qhelisela indlela elungileyo kuba bayazi ngokwenene iimpahla zazo.
IPHEPHA: 1 2
6 Izizathu ukubhala phantsi Cell yakho mfono
9 Imihla Wonke Ukusuka San Francisco Ngazo
6 Tips Ngexesha ngokutshata SMART!